Coronavirus ကနေအိမ်မှာလား။ အကောင်းဆုံး multiplayer အွန်လိုင်းဂိမ်းများ | Androidsis
coronavirus ကြောင့်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ကစားနိုင်ခြင်းကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင်အိမ်၌အကောင်းဆုံးကစားနည်းများဖြစ်သည်
ငါတို့ဘယ်တော့မှဒီလိုမျိုးထုတ်ဝေမှုမျိုးလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ Coradavirus ကြောင့်မက်ဒရစ်မှာလာမယ့်နှစ်ပတ်မှာငါတို့အိမ်မှာနေရမယ်၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ကစားရန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းများ ဒီရက် coronavirus အဘို့နှင့်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ရှိသည်။
Android မှာငါတို့မှာအွန်လိုင်းဂိမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကများစွာသောအရေအတွက်နှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအမျိုးအစားအားလုံးကိုစုဆောင်းတော့မယ်။ ဘုံပိုင်းခြေ - အွန်လိုင်း multiplayer။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အိမ်၌ဤ quarantine ဖြတ်သန်းသွားနိုင်အောင်လုပ်ရန်သွားကြသည်။
1 Brainito ပါ
3 မာရီယို Kart ခရီးစဉ်
4 PUBG မိုဘိုင်း
5 Royale ထိပ်တိုက်တွေ့
8 Duty မိုဘိုင်းလ်ခေါ်ဆိုမှု
9 hay နေ့
13 Pokemon မာစတာ
14 မေး 2
15 Minecraft Pocket Edition
16 ဘုရားသခင့်နှလုံးတော်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စု X
17 Black ကန္တာရမိုဘိုင်း
18 အရောင်ချွတ်မိုဘိုင်း 3D
20 ဒုတိယ Galaxy
22 နည်းဗျူဟာ Cool
24 ကျောင်းဟောင်း Runescape
25 GO scrabble
ကျနော်တို့ကတစ်နေ့အကြာကဒီဂိမ်းအသစ်အကြောင်းပြောခဲ့တယ် online multiplayer Apalabrados လိုပဲငါတို့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဘယ်လိုစမ်းသပ်မလဲ ကျွန်တော်တို့ကိုသင်္ချာနဲ့အက္ခရာနှစ်ခုလုံးပေးတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသော interface ကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက်၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုဝင်များနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဆော့ကစားနိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောကစားသမားနှင့် multiplayer mode များ။
ဤမျဉ်းကြောင်းများအထက်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖန်တီးခဲ့သောဗီဒီယိုတစ်ခုချန်ထားခဲ့သည် Francisco Ruiz သူကဂိမ်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသူရှင်းပြပြီးအဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့အကြံပြုတယ်။
Brainito - ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ပေးစာများ
ရေးသားသူ: Juanma Altamirano placeholder ပုံရိပ်
Terraria သည်အခမဲ့ကစားနည်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လာမည့်နှစ်ပတ် (သို့) ထိုထက်ပိုသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်သို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကစားရန်ကစားသမားတစ် ဦး ကိုရှာလိုလျှင်၎င်း၊ သတ္တုတွင်းများတွင်စွန့်စားမှုများကိုလက်မှုပညာ၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊, Terraria အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌အကောင်းဆုံး sandbox ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်နှင့်တပြေးညီကစားရန်ကစားသူများစွာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်သူတို့၏ကစားနည်းသို့မဟုတ်ဇာတ်ကောင်များဖြင့်ကစားပါလိမ့်မည်။ 1.3 တွင်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ updated ခဲ့သည် နှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက် optimized interface တစ်ခုနှင့်အတူ။
ရေးသားသူ: 505 ဂိမ်းများ Srl
စျေးနှုန်း: € 5,49
မာရီယို Kart ခရီးစဉ်
အချို့ကော သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကာတွန်းပြိုင်ကား? ကောင်းပြီ Mario Kart Tour ပြီးသား ဒါကြောင့်အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဂိမ်းရှိပါတယ် သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်။ Isaဒီဂိမ်း၏အကြီးမားဆုံးအသစ်အဆန်း၏ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိထောင်နှင့်ချီသောကစားသမားများ၏အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်သည့် Nintendo မှဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောဆားကစ်များ၊ အက္ခရာများ၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကိုနှိမ်နင်းရန်အစွမ်းထက်သောစွမ်းရည်များ။
ရေးသားသူ: ကို Nintendo Co. , Ltd
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့သင်္ချာကစားခဲ့ပြီးပြီ၊ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ခံတပ်တည်ဆောက်ထားတယ်၊ ငါတို့မှာပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ဒီ adrenaline အချို့ကိုဒီညာဘက်ကနေထုတ်ယူသွားမှာပါလား။ ကောင်းပြီ, PUBG Mobile သည်အကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲတော်ဝင်မင်းသမီးတစ်ခုဖြစ်သည် ကစားသူ ၉၉ ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ကစားသမားကြီးအွန်လိုင်းကစားသမား သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများ၊ သို့မဟုတ်သူစိမ်းများကိုပင်အသင်းများဖွဲ့စည်းနိုင်လိမ့်မည်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၌ ၎င်း၏ဒုတိယနှစ်ပတ်လည်ကျင်းပ သင့်ရဲ့ဟစ်စပန်းနစ်ရပ်ကွက်ထဲဝင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်။
ရေးသားသူ: အဆင့် အဆုံးမရှိ
Supercell's Clash Royale ၏မြန်ဆန်သောကစားနည်းများကိုဘေးဖယ်ထား။ မရချေ။ ယခုသီတင်းပတ်များအတွင်းဒက်ဘစ်ကဒ်ဖြင့်သုံးစွဲခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ချောင်းဖြင့်ထိုးနှက်နိုင်သည့်ကစားသမားများရှိသည်ကိုဘယ်တော့မှသတိမထားမိသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ က ခြွင်းချက်ဂိမ်းအလွန်ပရီမီယံပေမယ့်။ ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်၊ အမျိုးမျိုးသောယူနစ်များနှင့်အမြန်စီးနင်းမှုအတွက်သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားနိုင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုဝင်များနှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပျော်စရာဂိမ်းများကစားခြင်းအကြောင်းပြောပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲသို့လျင်မြန်သွားသည် ချီးကျူး။ ဂိမ်းတစ်ခု နှစ်ပေါင်းများစွာငါတို့နှင့်အတူရှိခဲ့သည်သို့သော်၎င်းသည်မိုဘိုင်းနှင့်တွဲဖက်ကစားရန်အလွန်ကောင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။ Brainito လိုစာလုံးတွေကိုရေးရမယ်၊
နှင့်သင်တန်း၏, တစ် Blizzard ၏ကျွမ်းကျင်သူလက်ဖြင့်ကဒ်ဂိမ်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် Cross-platform ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးကစားရန်အတွက်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဂိမ်းကိုသင်၏လက်တော့ပ် မှနေ၍ သင့်လက်ပ်တော့ပ်မှဆက်လက်ထားနိုင်သည်။ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး နှင့်ဤသည်အခါအားလျော်စွာနှစ်ပေါင်းများစွာ update လုပ်ထားပြီးတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏ကဒ်များကိုသုံးပါ၊ အခြားသူများကိုသော့ဖွင့်ပြီးအခြားကစားသမားတစ် ဦး ကို 1V1 ဖြင့်တိုက်ခိုက်ပါ။
ရေးသားသူ: Blizzard Entertainment က, Inc
Duty ၏ခေါ်ဆိုမှု Saga မသိသောဤလောက၏ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်၎င်းကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည် high-caliber multiplayer online shooter ဂိမ်းမှသင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရည်အသွေးအားလုံးရှိသည်။ လျင်မြန်စွာဂိမ်းများ, တော်ဝင်စစ်တိုက်ခြင်းနှင့်ကြီးစွာသောပညာသည် Tencent Games ဖြင့်အွန်လိုင်း multiplayer တွင် PUBG ၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းကိုတီထွင်ခဲ့ကြသောတူညီသောဂိမ်းများကိုပါ။ ၎င်းတွင် royal pass၊ မတူညီသော mode များနှင့်သင်တတ်နိုင်သမျှရှိသည် Duty ၏ခေါ်ဆိုမှုမှမျှော်လင့်ထား.
Duty ၏ခေါ်ဆိုမှု - မိုဘိုင်း
ရေးသားသူ: Activision ထုတ်ဝေရေး, Inc
Supercell မှငါတို့တွင်လည်းသူတို့၏အနိုင်ရသောမြင်းများရှိသည်။ Hay Day မှလွဲ၍ အခြားတစ်ယောက်မျှမရှိပါ။ သင်ရနိုင်မည့်လယ်ယာမြေ Simulator သင့်နွားမ၊ ကြက်၊ သိုး၊ ဆိတ်များ ဒိန်ခဲ၊ ကိတ်မုန့်နဲ့တခြားအရာတွေလုပ်နိုင်မယ့်ကိရိယာတွေ။ ကစားသမားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်ရန်အတွက်ကစားသူသည်မြို့တွင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည့်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏အစ်ကို၏လယ်ယာကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့မြင်းပြိုင်ပွဲများနှင့်အခြားအရာများစွာကစားနိုင်သည်။ အခါအားလျော်စွာ update လုပ်သည်ဒါကြောင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာအမြဲရှိပါတယ်။ အလွန် freemium ။
ငါတို့ကြိုက်ကြလိမ့်မယ် stardew ချိုင့်ဝှမ်းကိုတင်, ဒါပေမယ့်သူက multiplayer မရှိသေးဘူး (အဲဒါကိုaနဲ့မွမ်းမံထားပေမယ့်) update အသစ်), ဒါ ငါတို့ရိတ်သိမ်းမွန်း၏ပွင့်လင်း beta ကိုရှိသည်, သင်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်သည့်တူညီဂိမ်း။ Hay Day ရဲ့အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဒီတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့မှာလှုပ်ရှားဖို့ဇာတ်ကောင်မရှိဘဲတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဒီနေရာမှာငါတို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးတဲ့ Avatar တစ်ခုရှိသည်။ ခုတ်လှဲခြင်းနှင့်လယ်ယာအပေါ်လိုအပ်သောသူအပေါငျးတို့အလုပ်များကို အလွန်ကောင်းသော pixel အနုပညာနှင့်အတူအလွန်လှပသော။
ရေးသားသူ: AVIDGamers များ
ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့ထားရန်စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံပြီ စစ်တုရင်စစ်ပွဲအဖြစ်စစ်တုရင်စစ်တိုက်ခြင်း, ဒါပေမယ့်သူက beta ကိုသုံးနေတုန်းပဲ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သောကစားနည်းလည်းမများလှပါ။ Tencent အားကစားပြိုင်ပွဲမှပြုလုပ်သည့်စစ်တုရင်။ သင်ပျော်မွေ့နိုင်ရန်အတွက်ယူနစ်တစ်ခုချင်းစီကိုသိရန်ရှိသည်သောတစ်ဖွဲ့လုံးစစ်တိုက်စစ်တုရင် မိနစ် ၃၀ အထိရောက်နိုင်သည့်ဂိမ်းများ။ သင်၏အချိန်ကိုယူရန်သင်အကြံပေးလိုသည်မှာသင်သည်းခံရန်သင်သည်းခံရန်လိုအပ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာနှင့်အမြင်အာရုံအရည်အသွေးနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်း; အကယ်၍ သင်ကဒီလိုဂိမ်းမျိုးကိုကြိုက်လျှင်၊ ဒီနှစ်ခုကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့.
အကယ်စင်စစ်သင်သည်ငါတို့ရှိလျှင်ကြည့်ရှု scrolled ပါပြီ ငါ Forntite ထားရန်မေ့လျော့ခဲ့သည်ဤစာရင်းတွင် Fortnite သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း။ ထိုကျောင်းခြံဝင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိစတုရန်းနေရာသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ရှိပန်းခြံကိုလူသိများပြီးသားမြေပုံဖြင့်အစားထိုးခဲ့သောဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့မမေ့နိုင်ပါ။ က ကြီးသောအမြင်အာရုံဗေဒနှင့်အတူတော်ဝင်စစ်တိုက်ခြင်း နှင့်သန်းပေါင်းများစွာကကစားလျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး Epic Store မှသော်လည်းကောင်း Android တွင်ရှိသည်။
Fortnite - ကုန်ချ
ကျနော်တို့ပိုကီမွန်နှင့်အလှည့် -based တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းပျောက်နေခဲ့ကြသည်။ Pokémon Masters ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုမှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်၊ 3v3 အလှည့် -based တိုက်ပွဲများ သင်သည်သင်၏ပိုကီမွန်တိုးတက်အောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးသို့သူတို့ကိုငါယူပါလိမ့်မယ်ရသော။ ဒီအကြီးအ Saga အပေါငျးတို့သမှော် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
Apalabrados ကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်တူညီသောဂိမ်းစတူဒီယိုနှင့်ယခုအချိန်တွင်လာသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို“ အသေးအဖွဲလိုက်စားခြင်း” တွင်ထည့်ထားသည် အရာအတွက်ကျနော်တို့ဖြေဆိုရန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မေးခွန်းများကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ဒီဆောင်းပါး၏ multiplayer စင်တာတွင်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းများရှိသည်။ သင် coronavirus ကိုဖြတ်သန်းစဉ်ဆိုဖာပေါ်တွင်အချိန်များစွာကုန်လွန်သွားသောအခါသင်အမှန်တကယ်ကိုက်နိုင်သည်။
ဤစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မလွတ်နိုင်သည့်နောက်ထပ်ကြီးစွာသော multiplayer online game သင်ဟာ Cube ကိုသုံးပြီးစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အရာအားလုံးကိုဖန်တီးနိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ mode ကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အခြားသူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားရန်ရှင်သန်မှု mode ကိုပင်ပျော်မွေ့နိုင်သည် စိန်နှင့်အဖိုးတန်ကျောက်များကိုဖြတ်ရန်မိုင်းများထားခဲ့ပါပိုမိုကောင်းမွန်သောသံချပ်ကာများဖန်တီးရန်နှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများအတွက်သမုဒ္ဒရာကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သင်၏ရဲတိုက်သို့ပြန်သွားပါ။ Minecraft Pocket Edition နောက်ဆုံးထွက် နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ဤအိမ်သည် coronavirus ဒုက္ခသည်များနေအိမ်တွင်အိမ်၌ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်း: € 7,49
ရင်ပြင် Enix ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ RPG ဂိမ်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် gacha အများကြီးနှင့်အတူ အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ပျော်မွေ့ဖို့သမဝါယမ multiplayer မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ။ Donald Duck အစွမ်းထက်စွမ်းရည်များစတင်သည့်အခါပျော်စရာနှင့်သိလိုစိတ်ပြင်းပြသောပင်လယ်ရေတံခွန်များရှိရန်ဒစ္စနေးကမ္ဘာကိုကျွန်ုပ်တို့လက်၌ရှိတော့မည်ဟုဘာပြောရမည်နည်း။
ရေးသားသူ: Square ENIX INC
MMORPGs များကိုကျွန်ုပ်တို့မထည့်ထားပါ၊ ၎င်းသည်ထူးကဲသော Black Desert Mobile အတွက်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အမြင်အာရုံအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်မှန်ကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ရာနှင့်ချီသောစွန့်စားခန်းများရရှိနိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ ၎င်း၏ထူးခြားထင်ရှားသောအချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်လက်ရာမြောက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်သည် ပင်စိုက်ပျိုးရန်မြေကိုထွန်နိုင်စွမ်း ထို့နောက်သင်၏အသီးများကိုစုဆောင်းပါ။ အခါအားလျော်စွာ update လုပ်.
ရေးသားသူ: ပုလဲ ABYSS
အလွန်ကြီးစွာသော multiplayer အစိတ်အပိုင်းပါ ၀ င်သည့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်ထူးကဲကောင်းမွန်သောနောက်ထပ် MMORPG ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် hack 's slash ၏တိုက်ခိုက်ရေး။ အမြင်အာရုံ၌သီလအပြည့်အဝဂိမ်း၌အခြားကစားသမားရင်ဆိုင်ရနှင့်အဲဒီမှာရှိပါတယ် အံ့သြဖွယ်ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ anime ထိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ၎င်း၏ဖျော်ရည်အားလုံးရရန်အလယ်အလတ်အကွာအဝေး terminal ကိုပြင်ဆင်နေသွားပါ။
ဒီဟာကအခမဲ့ဂိမ်းမဟုတ်ပေမယ့်ယူရို ၄.၄၉ ကုန်ကျသည် တူညီသောမိုဘိုင်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်တွင်မိသားစုအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုကစား သငျသညျအိမျမှာမိသားစုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းအခါ။ အချိန်ကုန်လွန်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းနှင့်သင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရရန်နည်းလမ်းမရှိပါကဤဂိမ်းသည် ဒီလအကြာထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သူကအမြင်အာရုံနှင့်နည်းပညာပိုင်းအားလုံးသူတွေကိုအရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်။ မိသားစုပြဇာတ်အတွက်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ရေးသားသူ: Marmalade ဂိမ်းစတူဒီယို
သော်လည်းဂိမ်းတစ်ခုကြားဖူး Eဝပဲ့တင်သံများကသာလွန်ခဲ့သည် အဆုံးစွန်သော beta သည်မရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့် coronavirus ကြောင့်လအနည်းငယ်ကြာနှောင့်နှေးမည်ဟုထင်ရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဒုတိယ Galaxy သည်သင့်အားလေ့လာရန်ဖိတ်ကြားသည် ကျော် 4.000 နဂါးငွေ့တန်း၏ဝာ MMO တစ်ခုလုံးရှိသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်လက်ချင်းချိတ်ပါ။ သူမသည် Eve Echoes ကိုမနာလိုစရာမလိုပါ နာရီကိုယူ။ သာမန်ထဲကရ, အကောင်းတစ် ဦး Spatial အတွေ့အကြုံကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
အွန်လိုင်းဒုတိယဘဝကိုနေထိုင်ရန် Mini Life သည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ အဲဒါရှိတယ် လူမှုရေး Simulator ကိုထိ ပရိဘောဂများဖြင့်အလှဆင်ရန်သင့်ရဲ့ Avatar ကိုဖန်တီးရန်နှင့်သင်၏အိမ်ကိုဒီဇိုင်းလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်သက်တာ၏ Sims များကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ Android မိုဘိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်ရှိသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအချိန်အနည်းငယ်အတူနေရန်နှင့်သင်အတူတူစျေးဝယ်ထွက်နိုင်မည့်ကစားနည်းတစ်ခု။ တစ်ခုမှာအတွေ့အကြုံနောက်တစ်ခုကိုရည်စူးပြီး၎င်းသည်အိမ်မှမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်အဆင်ပြေရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Mini Life: လူမှုကိုယ်ပွားကမ္ဘာ
ရေးသားသူ: KRAFTON, Inc
Un isometric အမြင်နှင့်အတူ 5v5 အွန်လိုင်းဂိမ်း နှင့်သင်အခြားသူများဆန့်ကျင်ကစားရန်မိတ်ဆွေများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်။ မင်းမျက်လုံး အရည်အသွေးမြင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူပေါင်းစပ် isometric ၎င်း၏နာမကိုအမှီဖော်ပြသည်အတိုင်းအလွန်နည်းဗျူဟာတိုက်ခိုက်ရေး၏အလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံကိုထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်မြေပုံများနှင့်ရထားလမ်းများမှဖြတ်သန်းသွားသောရထားကဲ့သို့သောတက်ကြွသောဒြပ်စင်များပင်။ သငျသညျ shooter သို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီပြီးပြည့်စုံသောထက်ပိုသည်နှင့်ငါတို့ coronavirus ၏ယနေ့ခေတ်နေအိမ်ကနေကစားရန်ဒီကစားသမားအွန်လိုင်းဂိမ်းများစာရင်း၏ဤစာရင်းတွင်အတိအကျထည့်သွင်းထားပါတယ်။
Tacticool - 5v5 သေနတ်သမား
ထပ်မံ isometric အမြင်ဖြင့်, Supercell သင်အလိုရှိသည့်ဤအွန်လိုင်းဂိမ်းကိုစတင်ခဲ့သည် အခြားသူများကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပူးပေါင်းနိုင်ခြင်း ကစားသမားများ။ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအလွန်ကောင်းစွာချောခေါင်းစဉ်။ ၎င်းသည်အားလုံးသော freemium တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏မိုဘိုင်းနှင့် တွဲဖက်၍ ကောင်းမွန်သောအချိန်ကိုပျော်မွေ့စေလိမ့်မည်။ ဒီလှည့်ကွက်တွေကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့ ကောင်းစွာသင်ကိုင်တွယ်ရန်။
ဒီစာရင်းမှာရှိ MMORPGs ၏ Runescape သည်သံသယမရှိဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Android မှာဖြန့်ချိတဲ့ဂိမ်း လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကကွန်ပျူတာများမှဖြစ်သည် ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ မိုဘိုင်းဗားရှင်းတွင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရနိုင်သည့်အစစ်အမှန် MMO ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တူသောဤသည်နေ့ရက်ကာလလာပါတယ် စကားလုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း၏စုစုပေါင်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၇၀ ကဖန်တီးခဲ့တယ်။ ထူးခြားတဲ့ modes အမျိုးမျိုး၊ ကောင်းမွန်တဲ့ interface၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူဖွင့် -based ဂိမ်းများ၊ အဆင့်မြှင့်နိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဖုန်းစာအုပ်မှအဆက်အသွယ်များကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းနှင့်အတူသူတို့နှင့်အတူပျင်းရိခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဂိမ်းများကစားနိုင်သည်။ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အချိန်များများရရန်အတွက်ယူရိုငွေတစ်ပြားသုံးစွဲရန်မလိုအပ်သည့် Freemium ဂိမ်း။ Coronavirus ကြောင့်အိမ်တွင်နေခြင်းသည်မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။
Coralavirus မြို့မှ Salem မြို့မှအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါယနေ့ခေတ်သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားရန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းကစားနည်းများ၏စာရင်းကိုအဆုံးသတ်ကြပါစို့။ ဒါဟာထူးခြားတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် သင်သည် "Cluedo" အမျိုးအစားဖြင့်အခြားကစားသမားများနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ, လူသတ်မှု၊ မုသားနှင့်သံသယတို့သည်ကစားပွဲတစ်ဝိုက်တွင်လည်ပတ်နေသောဝင်ရိုးဖြစ်သည် အရာ၌ငါတို့သူတို့၏မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့်အတူအခြားကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီရပါလိမ့်မယ်။ ညမှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုသတ်ဖို့တာဝန်ရှိမည့်ရန်သူကိုသင်လိမ်ပြီးရှာဖွေရမည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားတူသောဂိမ်းနှင့်လွဲချော်မထားဘူး ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်.
လမ်မြို့ - အဆိုပါပCိညာဉ်တရား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » coronavirus ကြောင့်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ကစားနိုင်ခြင်းကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင်အိမ်၌အကောင်းဆုံးကစားနည်းများဖြစ်သည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ထိုစနေ၊ တနင်္ဂနွေများကိုအိမ်တွင်းခလုတ်ကစားခြင်းများတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးရန်။ အလွန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း! ဦး လေး!
ယခုခေတ် quarantine တွင်ဘာသာစကားများကိုသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးသောအက်ပလီကေးရှင်းများသည်အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချသည်
တိုင်းပြည်သည် PDF ဖြင့်ပုံနှိပ်ထားသောဗားရှင်းကိုလူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်